International magweta eICT muNetherlands - Law & More
Nekuda kwekugadzirwa kweinternet, yakawanda yemutemo mibvunzo yakamuka. Izvi zvakateverwa nekuiswa kwemutemo weICT. Mutemo weICT une hukama hwakawanda nedzimwe nzvimbo dzemutemo, senge mutemo wechibvumirano, mutemo wepachivande uye mutemo wepfuma wepfungwa. Mukati meidzi nzvimbo dzese dzemutemo, mibvunzo ine chekuita nemutemo weICT inogona kumuka. Iyi mibvunzo inogona kuve inotevera: 'zvinoita here kudzosa chimwe chinhu chandatenga pa internet?', 'Ndedzipi kodzero dzangu kana ndichishandisa internet uye kodzero idzi dzinochengetedzwa sei?' uye 'zvangu zviri online zvakachengetedzwa pasi pemutemo we copyright?' Nekudaro, mutemo weICC mukati mawo unogawaniswa muzvikamu zvakasarudzika zvemutemo weICT, senge software software, mutemo wekuchengetedza uye e-commerce.
ZVINODAIWA NEKUTI MUTEMI weITC?
Nekuda kwekugadzirwa kweinternet, yakawanda yemutemo mibvunzo yakamuka.
> Chengetedzo Mutemo
> SAAS & Gore
> IT Inobata
> Kuenderera mberi Zvirongwa & Escrow
> Webhu Chitoro Mutemo
> Kubata & Colocation
> Software Mutemo
> Open Source Source
Izvi zvakateverwa nekuiswa kwemutemo weICT. Mutemo weICT une hukama hwakawanda nezvimwe nzvimbo dzemutemo, senge mutemo wechibvumirano, mutemo wepachivande uye mutemo wepfuma wepfungwa. Mukati meidzi nzvimbo dzese dzemutemo, mibvunzo ine chekuita nemutemo weICT inogona kumuka. Iyi mibvunzo inogona kuve inotevera: 'zvinoita here kudzosa chimwe chinhu chandatenga pa internet?', 'Ndedzipi kodzero dzangu kana ndichishandisa internet uye kodzero idzi dzinochengetedzwa sei?' uye 'zvangu zviri online zvakachengetedzwa pasi pemutemo we copyright?' Nekudaro, mutemo weICC pachawo unogone kukamurwa munzvimbo dzenzvimbo dzemutemo weICT, senge software software, mutemo wekuchengetedza uye e-commerce.
Ithimba re Law & More ine ruzivo rwakajeka maererano nemutemo weICT uye nezvematunhu emutemo anoenderana nemutemo weICT. Naizvozvo, magweta edu anogona kukupa zano nezvezvinyorwa zvinotevera.
• Mutemo wekuchengetedza;
• SaaS uye iCloud;
• IT zvibvumirano;
• Kuenderera kurongwa uye escrow;
• Webshop mutemo;
• Kugamuchira co-nzvimbo;
• Software mutemo;
• Vhura sosi software;
• Maindasitiri Software.
Security Mutemo ndiyo munda wezvemutemo une hanya nekuchengetedza ruzivo. Misoro isiri yakajairika mundima iyi yemutemo inosanganisira mavhairasi emakomputa, kupinda mukati memakombiyuta, kuba nekuvhara kwedata. Kuti uchengetedze ruzivo rwakachengetedzeka uye rwakavanzika rwakachengeteka, pane yese seti matanho anokwanisika. Semuenzaniso, makambani ivo pachavo vanowanzoshandisa zvisiri pamutemo matanho anoenderana nekuongororwa kwengozi. Nekudaro, kuchengetedza uku kune zvakare chikonzero chepamutemo. Mushure mezvose, iyo ndiyo iyo paramende inosarudza kuti matanho ezvekuchengetedza anofanirwa kunge akaomesesa sei.
Kana iwe uchifunga nezvemitemo matanho munhu anokwanisa zvakare kufunga nezve'Wet bescherming persoonsgegevens '(Yega Dziviriro Dziviriro Mutemo). Iyo Yega Dziviriro Dziviriro Mutemo inoti inofanirwa kuve yakajeka kuti ndeapi matanho akatorwa kuchengetedza data pachako kubva pakurasikirwa kana kusiri pamutemo kugadzirisa. Izvi zvinogona kusanganisira kubatanidzwa kwakasununguka pakati pevavha uye mushanyi: kubatana kweSSL. Passwords zvakare chikamu chekuchengetedza kwakadaro.
Kunze kweMutemo weDziviriro Dziviriro, zvimwe zviitiko zvinopiwawo mhosva. Kubira kunorangwa pahwaro hwechinyorwa 128ab cheDutch Criminal Code.
Kuti udzivirire ruzivo rwako, zvakakosha kuziva kuti kuchengetedzwa kwemashoko kunoshanda sei uye kuchengetedza kwako nedanho remumwe munhu nenzira yakachengeteka sezvinobvira. Law & More inogona kukupa zano pamutemo wepamutemo wekuchengetedza ruzivo.
SAAS & Gore
Software seShumiro, kana SaaS, isoftware iri kupihwa sevhisi. Zvesevhisi yakadai, mushandisi haadi kutenga software, asi anokwanisa kuwana SaaS pamusoro pe internet. Kubatsira kweaSaS masevhisi ndeyekuti mitengo yemushandisi iri yakaderera.
A SaaS sevhisi seDropbox ibasa rebasa. Iro sevhisi network kune network uko ruzivo rwakachengetwa muCloud. Mushandisi haasi iye muridzi wegore uye nekudaro haana mhosva yekuchengeta kwayo. Iyo Cloud Provider inobatsira kune gore. Mashandiro emakore anosungirwawo kune mimwe mirairo, iyo inonyanya kuve yakavanzika-inoenderana nemitemo.
Law & More inogona kukurayira pane yako SaaS uye gore mabasa. Magweta edu ane ruzivo uye ruzivo mune ino ndima yemutemo, semhedzisiro yavanogona kukubatsira iwe nemibvunzo yako yose.
Semhedzisiro yenyika yedu yedhijitari, makambani mazhinji ave achivimba nekushanda kwakakodzera kwehunyanzvi hweruzivo. Nekuda kwekuvandudzika uku, zvava kuita zvakanyanya uye kuve kwakanyanya kuve nezvimwe zvinhu zveIT zvine zvakarongeka. Semuenzaniso, yekutenga kwemahara kana rezenisi re software, chibvumirano cheIT chinofanira kuvezwa.
Zvibvumirano zveIT, sezita rinoratidza, zvibvumirano zvisingapfuure se "nguva dzose" yekutengesa, chirevo chekuvanzika, zvibvumirano zvebasa, zvibvumirano zveSoftware, zvibvumirano zveSaS, Cloud zvibvumirano uye escrow zvibvumirano. Muchibvumirano chakadaro, zvibvumirano zvinoitwa maererano, semuenzaniso, mutengo, waranti ye kana dhirire pane chakanakira kana sevhisi.
Panogona kunge paine matambudziko kana uchinge uchigadzira kana kutevedzera chibvumirano cheIT. Ikoko, semuenzaniso, unogona kusava nechokwadi chekuti chii chinofanira kuburitswa kana pasi pechirevo chakatemwa. Naizvozvo zvakakosha kuti gadziriso dzakajeka dziitwe uye kuti gadziriro idzi dzakanyorwa muchibvumirano.
Law & More inogona kukurayira pane ako ese IT zvibvumirano. Tichaongorora mamiriro ako uye tinokwanisa kunyora chibvumirano chetsika chekunzwika kwemhando yekusangana nezvido zvako.
Kuenderera mberi Zvirongwa & Escrow
Kune vashandisi vetekinoroji yeruzivo zvakakosha kuti vakwanise kuva nechokwadi chekuti software yavo nedata rinogona kuramba richishandiswa. Chirongwa chekuenderera mberi chinogona kupa mhinduro. Urongwa hwakadaro hwekuenderera mberi huchapera nekubatana pamwe neye IT service mupi. Izvi zvinoreva kuti, Kana semuenzaniso kubhuroka, mabasa eIT anogona kuenderera mberi.
Nechinangwa chekutanga chirongwa chekuenderera, zvichave zvakakosha kutarisa mhando yeIT yebasa. Dzimwe nguva kodhi kodhi yescrow scheme ichave yakakwana, nepo mune zvimwe zviitiko kuchave kuri madikanwa kuita mamwe marongero. Panyaya yekuenderera kweCloud one semuenzaniso unofanirwa kugara uchifunga nezvese vatengesi nevamiriri vekutambira.
Chirongwa chekuenderera chakakosha pakuchengetedza yako data. Law & More ndinogona kukupa zano pachirongwa chekuenderera mberi. Tinogona kukubatsira iwe kunyora chirongwa chakadai kuitira kuchengetedza software yako uye data.
Webhu Chitoro Mutemo
Webshops ari kubata nehuwandu hukuru hwepamutemo masitimu avanofanira kutevedzera. Kutenga kwekuenda kure, kodzero dzevatengi, mutemo wekuki, mirayiridzo yeEurope uye zvimwe zvinhu zviri pamutemo izvo webshop ichatarisana nayo. Izwi rokuti 'mutemo wechitoro chewebhu' rinopa izwi rinosanganisira zvese izvi.
Nekuda kwemitemo mizhinji, zvinokwanisika kuti iwe pane imwe nguva "haugone kuona huni yemiti". Ini ndinofanira kushandisa mazwi nemamiriro? Inoyeukwa sei nemutengi inoshanda? Ndeapi ruzivo rwandinofanira kupa pane webhusaiti yangu? Ndeipi mitemo iripo nezvekubhadhara? Zvakadiniko nezvemitemo yekuki? Chii chandinofanira kuita neako pachako data yandakawana kuburikidza newebhu chitoro changu? Uku ndiko kusarudzwa kwemibvunzo iyo muridzi wewebhu chitoro anogona kusangana nayo.
Zvakakosha kuti izvi zvinyatsorongwa zvakanaka. Zvikasadaro, unogona kuisa mungozi faindi. Aya mafaindi anogona kusvika pakakwirira uye anokwanisa kukanganisa kambani yako. Kunyatso kuziviswa pane izvi zvinhu saka kuchaderedza njodzi dzako.
Law & More inogona kukupa zano pane kutevedza kwako mutemo unoenderana. Uyezve, tinogona kukubatsira kunyora magwaro epamutemo anoenderana newechitoro chewebhu.
Kubata & Colocation
Kana mumwe munhu achigamuchira kana achida kutora webhusaiti, munhu anofanirwa kugara achifunga nezvemutemo unoshanda. Paunenge uchibata webhusaiti, data richachengetwa uye dzimwe nguva rinotopfuudzwa. Izvo zvakakosha kuti uzive maitiro aunofanira kubata iyi data vis-á-vis mutengi wako, asi zvakare kune vechitatu mapato.
Iwe unofanirwa kunge uine mazwi akajeka maererano neako kutambira uye ayo epamutemo zvikamu. Izvo zvakakosha kuti vatengi vazive zvinoitika nedata ravo. Vatengi vanoona zvakakosha kuti data ravo rakachengetedzwa nokungwarira. Izvo zvakakoshawo kuti tizive kuti ndiani anokodzera kana mitemo yedata ikatyorwa.
Iwe unodikanwa kuchengetedza kuvanzika kwevatengi vako? Iwe unofanirwa here kupa ruzivo rwekuonana kana izvi zvichikumbirwa nemapurisa? Iwe une mhosva yekudzivirira data uye kuputsa data? Magweta edu anogona kupindura zvese izvi nemimwe mibvunzo yako yese. Kungave uine chero mibvunzo, iwe unogona kugara uchibata nemumwe wevamiriri ve Law & More.
Mazuva ano, zvingave zvisingafungiki kurarama munyika isina software. Mutemo weSoftware wakakosha kune vese vanogadzira software uye vashandisi ve software.
Iyo 'Auteurswet' (Copyright Act) inotsanangura kuti ndiani ane software yakati. Mukuita, zvakadaro, hazviwanzo kuve pachena nguva dzose ndiani muridzi we software uye saka ndiye muridzi wemakopi. Vagadziri veSoftware vanotengesa chigadzirwa chavo, vanowanzoda kuchengetedza zvinyorwa zvavo. Izvi zvinoderedza mukana wevanoshandisa software kuti vashandure software. Izvo zvinowedzera kuomarara kana mushandisi achida kugadzira (yake) software. Ndiani zvino achazowana zvinyorwa.
Kuti uderedze njodzi dzako, zvakakosha kuti usarudze pachine nguva kuti ndiani achatora zvigadzirwa. Law & More inogona kukupa zano pamutemo we software uye inogona kupindura mibvunzo yako maererano neiyi ndima yemutemo.
Kana iri yakavhurwa sosi software, mushandisi anogamuchira iro rinobva kodhi software paunenge uchitenga rezinesi. Izvi zvine mukana uyo vashandisi vanogona kugadzirisa uye kuvandudza software kuitira kuti software yacho irambe ichikura. Mune dzidziso, izvi zvechokwadi zvinonzwika zvinobatsira uye nenzira inoshanda: ani naani ane ruzivo rwemakodhi anogona kugadzirisa yakavhurwa sosi software.
Mukuita, zvakadaro, zvakakosha kwazvo kumisikidza mimwe mitemo yekushandiswa kwesoftware software yakavhurika, kutonga uye kujekesa kushandiswa kweiyo open source software. Izvi zvakatonyanya kukosha iko zvino kushoma kutariswa, apo zvirevo zvakawanda zviri kuendeswa nekuda kwekutyora rezenisi rekuvhurwa kwesoftware.
Law & More ndinogona kukupa zano pane rakavhurwa software. Ucharamba uri muridzi we software iyo iwe yaunogadzira iwe paunoshandisa rakavhurwa sosi software? Ndeapi mazwi uye mamiriro iwe aunogona kuradzika pasi pasi pekushandisa rezinesi? Ungaendesa sei chikumbiro kana raiti yako yadamburwa? Iyi mibvunzo iyo inogona kupindurwa nemumwe we magweta edu.
Software haina kungoshandiswa mumahofisi, asiwo mumaindasitiri. Zvigadzirwa nemishini zvakashongedzwa kana kugadziridzwa nesoftware. Iyi software yakasungirirwa yakanyorerwa kudzora michina kana zvigadzirwa. Mienzaniso yemhando dzakadai software inogona kuwanikwa mumashini, magetsi emota uye mota.
Sezvo zvakakosha kune 'yakajairika' software, (maindasitiri) mutemo wesoftware unokoshawo kune indasitiri software uye inopa mitemo yakakosha kune vese mavagadziri esoftware nevanoshandisa software. Iyo indasitiri yekugadzira indasitiri inogamuchira mari zhinji, izvo zvinoita kuti zvive zvakakosha kuchengetedza magokitori akakodzera.